Micromax နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဇန်နဝါရီလထဲမှာ Android Go smartphone တွေကိုစျေးအတင့်တင့်နဲ့ဖြန့်ချီတော့မယ့် Google! – AsiaApps
January 3, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Micromax နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဇန်နဝါရီလထဲမှာ Android Go smartphone တွေကိုစျေးအတင့်တင့်နဲ့ဖြန့်ချီတော့မယ့် Google!
Android Go smartphone တွေဆိုတာကတော့ Android မှာနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Version ဖြစ်တဲ့ Android Oreo (Go Edition) version smartphone တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Android Oreo (Go Edition) version smartphone တွေရဲ့စျေးနှုန်းကမြင့်မားပါတယ်။
Micromax will be delivering said $32 phone by the end of January, but more vendors are on board with producing low-budget Go phones.
မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Android go phone တွေကို Google အနေနဲ့ Micromax company နဲ့ပူးပေါင်းပြီး USD 32$ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Smartphone တွေကို အိန္ဒိယမှာဖြန့်ချီတော့မှာပါ။ သာမာန် 4G smartphone တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ USD 100$ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်မှာ အိန္ဒိယမှာဖြန့်ချီမယ့် Android Go smartphone တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာ USD 32$ သာရှိတာကြောင့် စျေးနှုန်းပိုင်းကတော့ တော်တော်တန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
Search giant Google has partnered with Indian phone vendors such as Micromax, Intex, Lava, Karbonn, among others, to launch cheap smartphones based on its Android Oreo (Go edition) operating system.
Google အနေနဲ့ အခုလိုစျေးသက်သာတဲ့ Smartphone ကောင်းကောင်းတွေကိုဖြန့်ချီနိုင်ဖို့ Micromax, Intex, Lava, Karbonn စတဲ့ Company တွေအပါအဝင် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အခြား company အချို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
They will have 1GB of RAM (or even half) and as little as 8GB of storage – dedicated slimmed-down versions of Google’s core apps make this possible.
ဇန်နဝါရီလကုန်မှာထွက်ရှိလာမယ့် Android Go smartphone တွေအနေနဲ့ကတော့ Ram 1GB နဲ့ 8GB storage ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google ရဲ့အဓိက Application တွေရဲ့ နောက်ဆုံး Version တွေကိုအသုံးပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Google and Micromax are bringinga$32 Android Go phone to India this month… pic.twitter.com/LjgKjOHsOA
— Techitgy (@Techtigy) January 2, 2018